Lalao sy rindranasa 5 maimaim-poana na amidy hisintomana izao | Vaovao IPhone
Lalao sy rindranasa 5 maimaim-poana na amidy hisintomana izao
Amin'ny tapaky ny herinandro dia mitondra safidy vaovao izahay lalao sy fampiharana maimaimpoana na amidy, na izany aza, andao hatrehana izany, anio dia resaka lalao no raharaha.
Aza adino fa ny tolotra rehetra dia manan-kery mandritra ny fotoana voafetra. Noho io antony io dia mamporisika anao izahay hampidina azy ireo haingana araka izay tratra mba hahafahanao manararaotra ireo fihenam-bidy. Hanomboka ve isika?
1 Star Wings: Adim-piainana an-habakabaka
4 Brigal Labyrinth volamena
5 Fandikana mora
Star Wings: Adim-piainana an-habakabaka
Manomboka ny safidintsika lalao maimaim-poana amin'ny alàlan'ny traikefa nahafinaritra, "Star Wings: A space adventure", lalao izay hampiala-voly anao betsaka ary isaorana ny fiandrasana hatramin'ny faran'ny herinandro ho zaka kokoa.
"Star Wings: A adventure adventure" dia a lalao mifototra amin'ny piozila izay tsy maintsy hiatrehanao "hery maizina" izay mikendry ny handresy an'izao rehetra izao. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mandresy iraka efapolo amin'ny toerana samihafa ianao, mamaha ny piozila hanatsarana ny sambon-habakabakao.
Mampiankin-doha sy mampihetsi-po, "Star Wings: A space adventure" dia lalao mety ho an'ny mpilalao tsotra sy mpidoroka. Ny vidiny mahazatra dia 3,49 euro, nefa azonao atao izao ny manafaka azy tanteraka.
Manohy ny «Belts» izahay, fiankinan-doha iray hafa lalao mifototra amin'ny fahaizanao mitazona ny fandanjalanjana sy ny fahaizanao mandresy ny lavaka, ny setroka ary ny vato misakana maro fanampiny. Ankoatr'izay, rehefa mandroso amin'ny lalao ianao, dia mihamitombo ny hafainganam-pandeha ary miaraka aminy, ny fahasarotana. Noho izany, "Belts" dia lasa lalao mampihetsi-po tokoa izay hahatonga anao handany ora maro eo alohan'ny iPhone, na hanipy azy eo am-baravarankely fahatezerana Miankina aminao!
Ny "fehikibo" dia misy vidiny mahazatra 1,09 euro, nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka izao.
Ary manohy amin'ny lalao izay ny mekanika ho fantatry ny ankamaroan'ny ianareo rehetra. "Blockis Pro" io, a sakana ny lalao amin'ny mekanika tsotra nefa koa mampiankin-doha, mifototra amin'ny Tetris malaza, saingy misy fanovana mahaliana sasany satria eto dia tsy manana karazana sakana telo fotsiny ianao, hijanona amin'ny marindrano na mitsivalana ihany izy ireo, na izany aza, tsy ho azonao atao ny manodina azy ireo toy ny amin'ny Tetris, ary tsy ho afaka hamindra azy ireo mandra-pahatongany hianjera amin'ny farany ambany. Ary na izany aza, tsy maintsy mameno laharana ianao mba hanjavonany ary tsy feno boka ny efijery.
Ny "Blockis Pro" dia misy vidiny mahazatra 1,09 euro, nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka izao.
Brigal Labyrinth volamena
Andao handeha amin'ny lalao fahefatra maimaim-poana! Amin'ity tranga ity dia «Brutal Labyrinth Gold», lalao iray izay atao maze tokana. Ny iraka ataonao dia ny hitondra ny baolina any amin'ny toerana farany alehany, fa noho izany dia tsy maintsy hialanao sakana be dia be amin'ny fipoahana sy afo. Ary rehefa avo lenta ianao dia hitombo ny fahasarotana sy ny fahasarotana ary hahita vato misakana vaovao sy sarotra resena ianao.
"Brutal Labyrinth Gold" dia manolotra kilalao an-tsitrapo mandritra ny ora maro Haavo 50 izay hahafahanao mizaha toetra ny hafainganana sy ny hakinganao ary na ny fahaizanao lojika aza mametaka ny iPhone hitondranao ny baolina.
"Brutal Labyrinth Gold" dia misy vidiny mahazatra 1,09 euro, nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka izao.
Ary mba tsy hilazana izany ao Vaovao IPhone Tsy mieritreritra afa-tsy ny hiala voly isika, faafaranay maimaimpoana ity lalao sy rindranasa ity na amidy miaraka amina fitaovana lehibe ho an'ny ankamaroan'ny mpandeha, mpianatra ary, amin'ny ankapobeny, ho an'ny mpampiasa rehetra. Ity dia «Fandikana Mora», fampiharana izay mamela ny anarany, araka ny anarany mandika lahatsoratra eo anelanelan'ny fiteny 32 tsy mitovy. Azonao atao ny mandika ireo fandikan-teny amin'ny paompy tokana ary koa mahay mamaky ilay lahatsoratra nadika.
Ny fiteny tohanana dia misy ny Arabo, Basque, Catalan, Sinoa ary Sinoa (nentim-paharazana), Anglisy, frantsay, alemanina, italianina, grika, japoney, rosiana, espaniola ary maro hafa.
Ny "Easy Translation" dia manana vidiny 10,99 euro mahazatra, nefa izao dia azonao atao amin'ny antsasaky ny vidiny.
Mandika -Fandikana mora€ 8,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Lalao sy rindranasa 5 maimaim-poana na amidy hisintomana izao
Notsapainay ny filan-tsofina Aukey SK-M8 mety hoentina na aiza na aiza